Cerro del Hierro, fahagagana voajanahary ao amin'ny faritanin'i Seville | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | | ecotourism, Fialan-tsasatra
Cerro del Hierro dia tsangambato voajanahary mahavariana ao amin'ny faritanin'i Sevilla efa ho fito hetsy metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Nitrandrahana ho toeram-pitrandrahana hatramin'ny andron'ny Romana, izy io dia mamorona, miaraka amin'ny manodidina azy, ny Valan-javaboary Sierra Norte.
Araka ny tondroin'ny anarany, dia tena sarobidy tamin'ny harena tamin'ny hierro ny vatolampy vatosokay. Saingy izao ny maha-zava-dehibe azy dia mitoetra amin'ny tontolo mahavariana izay mandrafitra ny tampony karst. Ary, ambonin'izany rehetra izany, noho ny sandany voajanahary ary ho tonga lafatra fitsangantsanganana sy fiakarana. Raha te hahalala bebe kokoa an'i Cerro del Hierro ianao dia mamporisika anao hanohy hamaky.
1 Ny fampitovizan'i Cerro del Hierro
2 Zavatra tokony hatao any Cerro del Hierro
2.1 Lalam-by an'ny Sierra Norte de Sevilla
2.2 Làlan'ny Cerro del Hierro
2.4 Ny tanàna fitrandrahana
3 Ireo tanàna tsara tarehy roa manodidina an'i Cerro del Hierro
3.2 Masindahy Nicholas an'ny seranana
4 Ahoana no ahatongavana any Cerro del Hierro
Ny fampitovizan'i Cerro del Hierro
Ny niandohan'ny Cerro del Hierro dia nanomboka tamin'ny Vanim-potoana Cambrian, izany hoe tokony ho dimanjato tapitrisa taona lasa izay. Izy io dia natsangana avy tamin'ny farafara an-dranomasina izay nampitaina ho vatosokay. Taorian'izay, ny tany dia karstified mamadika ny ampahany amin'ny haren'ny vy ho lasa oksida sy hidroksida izay miforona lalan-drà avy eo.
Izany rehetra izany dia nateraka tamin'ny fitrandrahana ny harena ao amin'ny lohateny Cerro del Hierro, izay, araka ny nolazainay taminareo, dia natombok'ireo Romana. Tany am-piandohan'ny taonjato faha-XNUMX, ireo orinasa Scottish dia nitrandraka ny mineraly ary namorona ny tanàna izay mbola onenana ary noho izany dia mbola afaka mitsidika ianao anio. Nisy aza ny làlam-by izay nampifandray ity faritra ity sy ny seranan'i Seville ho an'ny famindrana vy.
Ary tsy tokony ho mora ny fiainana any amin'ny faritra, satria antsoina hoe "Seville's Siberia", angamba misy fanitarana be loatra. Na izany aza, ny marina dia, amin'ny ririnina, ny mari-pahaizana maridre maromaro ambanin'ny zero dia miseho.
Zavatra tokony hatao any Cerro del Hierro
Araka ny efa nohazavainay, ity faritra ity dia mety fiakarana sy fitsangatsangana. Mikasika ity farany dia manana ala maitso sy làlan-kaleha be dia be izy ka tsy hadinonao. Hasehonay anao ohatra roa izy roa.
Lalam-by an'ny Sierra Norte de Sevilla
Marina tokoa ny filaharana lalamby izay efa noresahintsika teo aloha dia efa novaina ho làlam-by afaka mandeha tongotra na bisikilety an-tendrombohitra ianao. Ampahan'ny tanànan'ny fitrandrahana mihitsy ary, indrindra indrindra, amin'ilay antsoina hoe Tranon'ny anglisy, izay toeram-ponenan'ireo injeniera sy mpitantana ilay harena ankibon'ny tany taloha. Misy trano a izao Ivotoerana fandikana ao amin'ny Cerro del Hierro.
Làlan'ny Cerro del Hierro
Làlana iray hafa amin'ny fahatsorana lehibe tokoa izy satria roa kilometatra monja no misy azy. Ilaina ny mitsidika azy noho ny hatsaran-tarehiny voajanahary, miaraka amin'ireo fananganana vatolampy mahavariana toa azy ny lapiaces sy ny fanjaitra. Saingy koa satria miditra ao amin'ny tunnels sy galerian'ny toeram-pitrandrahana taloha izy io.
Ny faritra del Hierro dia faritra mety indrindra amin'ny fiakarana. Raha ny marina dia misy ny toerana manan-danja indrindra hampiharana an'ity fanatanjahantena ity any amin'ny faritanin'i Seville iray manontolo. Raha atambatra dia misy ny sasany fomba roa-polo amby zato izay misy ny fiakarana kilasika sasany fa ny hafa kosa maoderina sy be pitsiny kokoa. Raha tianao ity fanatanjahantena ity dia zava-dehibe ny hahafantaranao an'i Cerro del Hierro.
Ny tanàna fitrandrahana
Ankoatry ny fankafizanao ny natiora dia manoro hevitra anao izahay hitsidika ny tanàna fitrandrahana taloha izay efa noresahinay taminareo teo aloha. Ao anatiny, ankoatra ny fahitana ny taolan'ny trano, dia ho hitanao ihany koa ny fananganana fitrandrahana, trano fitehirizana, a Fiangonana anglikana ary ny antitra gara. Ianao koa dia manana ny foibe fandikana izay noresahinay ary trano fisakafoanana ahafahanao mameno ny baterinao.
Fiangonana anglikana taloha ao an-tanànan'i Cerro del Hierro
Ireo tanàna tsara tarehy roa manodidina an'i Cerro del Hierro
Fa ny fitsidihanao an'io fahagagana voajanahary io dia tsy ho feno raha tsy fantatrao ireo tanàna tsara tarehy roa manakaiky azy, kilometatra vitsivitsy fotsiny, ary eo anelanelan'ny ny tsara tarehy indrindra ao amin'ny faritanin'i Seville. Hiresaka momba azy ireo izahay.
Manakaiky an'i Cerro del Hierro dia ho hitanao ity tanàna kely fotsy ity izay misy mponina manodidina ny enina arivo any Sierra Morena. nanambara ny Toerana kanto manan-tantara, ny tanànan'i Constantina dia manan-javatra betsaka atolotra anao.
Hanomboka, azonao atao ny mitsidika ny azy ireo lapan'ny. Namboarina tamin'ny andro arabo angamba teo amin'ny taolan'ny trano mimanda taloha izy io. Na izany aza, ny fanovana farany nataony dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia fananana mahaliana ara-kolontsaina ary, na dia niteraka faharavana taminy aza ny fandehan'ny fotoana, fotoana fohy lasa izay no nanaovana ny fanavaozana.
Tokony hitsidika an'i Constantina the koa ianao Fiangonan'ny Tompovavintsika teraka, tempolin'i Mudejar tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia ny taonjato faha-XNUMX aza ny endrik'izy ireo mahavariana. Torohevitra mitovy amin'izany ihany koa ny fitsidihana ireo fiangonana any Nuestro Padre Jesús sy La Concepción ary ny efitranon'i Santa Clara sy Tardón.
Fa angamba ny zavatra tsara indrindra momba an'i Constantina dia azy satroka manan-tantara, miaraka amin'ny fananganana neoclassical an'ny lapan'ny tanàna sy ireo trano marobe ao aminy amin'ny fomba isam-paritra na koa neoclassical style. Ohatra tsara amin'izy ireo ny Casa lapa an'ny fanisana an'i Fuente. Farany, mamporisika anao izahay hamaky ny faritry Morería ary hijery ny Clock Tower.
Masindahy Nicholas an'ny seranana
Kilometatra vitsivitsy monja miala an'i Cerro del Hierro dia ho hitanao ity tanàna tsara tarehy ity na dia kely noho ny teo aloha aza satria manodidina ny enin-jato ny mponina ao aminy. Ao anatin'izany dia azonao atao ny mitsidika ny tsara tarehy Fiangonana Mudejar ao San Sebastián, ao anatiny no misy ilay endritsoratra nanaovana batemy azy San Diego de Alcala.
Iray monja amin'ireo tsangambaton'izy ireo ny hermitage of San Diego, koa Mudejar. Ary, eo anilan'ireo, ny Tetezana romana ambonin'ny renirano Galindón, vato amam-bato tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ny sisa tavela amin'ny tilikambo silamo.
Saingy mbola manana fahagagana hafa ho anao ihany i San Nicolás del Puerto. Momba ny Riandranon'i Huesna, tsangambato voajanahary izay anoroanay hevitra anao hahita. Izy io dia ahitana vondron-riandrano kely sy dobo kely voahodidin'ny ala sy ny zavamaniry amoron-drano.
Ahoana no ahatongavana any Cerro del Hierro
Ny làlana tokana alehanao mankany amin'io habaka voajanahary mahavariana io dia ny làlana. Azonao atao ny mampiasa azy io hatrany Constantina mankany atsimo na avy any San Nicolás del Puerto mankany avaratra. Amin'ny tranga voalohany, tsy maintsy mandray ny làlana ianao A-455 ary avy eo ny SE-163. Etsy ankilany, raha miala avy any San Nicolás ianao, dia mivantana ny lalana SE-163.
Ho fehiny, Cerro del Hierro Izy io dia tsangambato voajanahary mahafinaritra ahafahanao mandeha mihanika sy mitsangatsangana. Fa faly ihany koa ianao amin'ny ala-taniny ary tsidiho ireo tanàna roa mahafinaritra izay efa noresahinay. Raha manana fotoana mety ianao dia tsidiho fa tsy hanenenanao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » ecotourism » Cerro del Hierro